Vhidhiyo Itsva yaPaul McCartney Kupokana Nokudheerera, Inowanikwa chete paApple Music | Ndinobva mac
Vhidhiyo Nyowani yaPaul McCartney Kupokana Nokudheerera, Inowanikwa chete paApple Music
Chaizvoizvo kubvira payakatangwa, Apple Music yakaedza kusvika pazvibvumirano zvebhizimusi nemapoka akasiyana kana maartist kuti vakwanise kupa kwenguva pfupi basa rako idzva. Tiri munzira, takasangana nekumwe kupokana, kunyanya payakabata kambani yekurekodha, inoita kunge yakamanikidza Apple kumira kutevera nzira iyi.
Asi zvinoita sekunge haana kuzviita zvizere, sezvo isu tichigona kuverenga pane yepamutemo Apple Music Twitter account, vhidhiyo nyowani yaPaul McCartney inowanikwa chete paApple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi, vhidhiyo uko Pamusoro paMcCartney, Emma Stone anoonekwawo.
Kutanga kwako kutarisa @Paul MCCARTNEY's nyowani nyowani yemimhanzi iri pano! Tarisai #Ndiani ane hanya ikozvino, chete paApple Music! https://t.co/NpUNDf6us3 pic.twitter.com/bI2wMQLvFe
- Apple Music (@AppleMusic) December 17, 2018
Vhidhiyo inonzi "Ndiani Anotarisira" ine nguva yemaminetsi matanhatu uye iko kushevedza kwekuguma kwekudheerera. Sekureva kwaMcCartney:
Tariro yangu ndeyekuti kana paine vana vari kushamwaridzana, uye varipo, pamwe vachiteerera rwiyo urwu uye vachiona vhidhiyo iyi, vanofunga kuti haina kushata kudaro. Ndiro rudzi rwechinhu chaunogona kutarisana nacho, kuseka, uye kuburikidza nacho.
Kana iwe uchida kuona iyo vhidhiyo nyeredzi Paul McCartney naEmma Stone, iwe unofanirwa kungobaya pairi inotevera chinongedzo.
Kugona kuona iyi vhidhiyo Apple Music kunyorera kunodiwaKunyangwe iri yemahara yemwedzi mitatu kunyorera iyo Apple inopa kune vese vashandisi vatsva, kunyangwe kana iwe watonakidzwa nemuedzo uyu uye usingashandise, vamwe vashandisi vari kuona kuti vanezvezve mimwe mwedzi mitatu yavanogona.
Iye zvino, Apple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi ine 56 mamirioni, chimiro chinosanganisira vese vanobhadhara pamwedzi vashandisi uye avo vari kushandisa iyo yemahara kuyedza nguva iyo Apple inopa kune vese vashandisi vatsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Vhidhiyo Nyowani yaPaul McCartney Kupokana Nokudheerera, Inowanikwa chete paApple Music
Sphero anosiya rezinesi repamutemo rezvigadzirwa zveDisney. Mhoro kune BB-8 uye R2-D2
Adobe XD inogadziridzwa nenhau dzinonakidza